Suuqgeynta Apple miyey nuugtaa? | Martech Zone
Khamiis, May 28, 2009 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Suuqgeynta yaa runtii ku guuleysanaya halkan, Apple ama Microsoft? Guji iyada oo loo marayo haddii aadan arki video ah.
Qoraalkan waxaa dhiirigaliyay wadahadal aan ku biiray oo ku saabsan Microsoft ayaa dib u helaysa waxoogaa ka soo horjeeda Apple. Wadahadalku wuxuu kusii socday Twitter-ka isagoo wata tweet weyn oo ka yimid Kara:
From karaweber: @douglaskarr wuxuu ku riyaaqay qoraalkii maanta. Snarky wuu baxay, & ololaha "Waxaan ahay Mac" wuxuu bilaabanayaa inuu u akhriyo sidii wax cabsi badan. (FTR, sidoo kale waxaan ahay taageere Apple ah).
Waxaan rajeynayaa inay tani dhalisay dood weyn. Apple waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah kooxaha suuqgeynta ugu fiican Teknolojiyadda maanta, laakiin waxaan billaabayaa inaan yeesho feker labaad oo ku saabsan dadaalkooda. Miyuu suuqgeynku door weyn ka ciyaaray guushii ugu dambeysay ee Apple? Mise si fudud ayaa loo tuuray dakhli? Fadlan ha ku darin wax soo saarka suuqgeynta tan - Waxaan garwaaqsanahay in IPhone-ku yahay wax beddele ciyaarta ee warshadaha. Su’aasheydu ma ahan in Apple ay leedahay ama aysan laheyn wax soo saar wanaagsan, waa saameyn intee le’eg ayay suuq geyn ku yeelatay kororka weyn ee Apple ee iibka?
Dhab ahaantii ma suuq geyntii Apple ayaa isbadal sameysay?
Markay waqtiyadu adag yihiin oo dakhliga la tuuri karo hoos u dhaco, macaamiisha iyo ganacsatadu waa inay gaaraan go'aanno iibsi oo aad u adag. Maaddaama Microsoft ay ku guuleysaneyso saamiga suuqa ee Apple ee alaabada sida laptops, waxay umuuqataa in Microsoft ay ku guuleysaneyso dagaal qiime. Taasi waa, suuqgeynta Apple ee qabow, naqshad qurux badan, sahlanaanta isticmaalka, iyo dhib yar… ma shaqeyneyso.
Taasi waxay ka dhigan tahay in macaamiisha caqliga lihi aysan rumeysneyn in qiimaha Apple-ka uu u qalmo mar dambe. Apple ma sameyneyso kiiska… mana aaminsani (sidoo kale Kara ma rumeysna) in xayeysiisyada jilicsan ay caawinayaan iyaga. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay kaliya u dhawaaqi doonaan sida qaar caruur ah oo kharribmay oo ku faanaya tooygoodii cusbaa uguna farta siinayaan aasaaska (waa aniga iyo adigu).
Waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii la dili lahaa dhammaan ololaha Mac vs. PC.
Qeyb muhiim u ah suuqgeynta weyn ayaa ah timiriska. Waa muhiim in suuqgeyntaadu ay ahaato mid khuseysa dhagaystayaashaada… iyo isbeddelada ku yimid dhaqaalaha ee saameynaya go'aamada wax iibsiga dadka. Natiija ahaan, waa fure in la isku hagaajiyo. Waxaa la joogaa xilligii ay Apple la qabsan lahayd.
Tags: tufaaxasuuqgeynta tufaaxa
Nooca Kaamilnimada ayaa Dhintay
May 28, 2009 at 9: 38 AM
Waxaan u maleynayaa in cutubkaaga ugu dambeeya uu sharxayo sababta Apple u lumineyso saamiga suuqa. Maskaxda macaamiisha ayaa si aad ah isu badashay sanadkii la soo dhaafay ama wax la mid ah Apple wali ma aysan badalin istiraatiijiyadooda suuq geyn. Microsoft waxay leedahay, wax kayar $ 1500 oo xayeysiis ah laptop-ka ayaa toos u aadaya wadnaha macaamil qiime leh.
May 28, 2009 at 11: 55 AM
Hagaag! Xayeysiisyada Apple gebi ahaanba waa kuwo cabsi badan. Weligay ma jeclaan iyaga farna ma saari kari waayey sababta, waana ciladdu hubaal.
May 28, 2009 at 12: 16 PM
Waxaan u maleynayaa inay yihiin, oo in muddo ahba ay ahaayeen, suuqgeyn heer aqoon gaar ah leh. Dadka runtii aan dooneynin inay ku dhumiyaan gabi ahaanba mashiinadooda (hubaal aniga maahan), suuqgeyntoodu waa mid wax ku ool ah tan iyo markii ay isku dayayso inay muujiso sida ay u fudud yihiin Xayeysiintooda kor u qaadida "Geniuses" waxba iima tarin aniga, runti ma doonayo mana heli karo suuq weyn oo ciriiri ah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah, laakiin waxaan ka baari karaa khadka tooska ah si aan caawimaad uga helo qaybta 90% + ee PC-ga isticmaalayaasha. Xayeysiintooda "Ciribtirka" waxay isku dayayaan inay ii sheegaan in hal dookh kaliya uu fiican yahay, hadana markii aan iibsaday laptopkeygii ugu dambeeyay, Mac-da waa la dhaafay sababtoo ah ma aysan helin qaabkii saxda ahaa ee aan u baahnaa, laakiin waxaan awooday inaan helo PC-ga saxda ah taasi waxay lahayd wax walba oo aan doonayay.
May 28, 2009 at 2: 02 PM
Waxaan taageere u ahaa jabsyada khiyaanada leh ee lagu sameeyay taxanaha koowaad ee taxanaha ah ee Mac lagu daro. Laakiin waxaan u maleynayay inay qaateen diidmo aad u daran markii 9 bilood ka hor laga joogo, waqtiga "Vista bashing" la bilaabay. Tan iyo markaas, ra'yigayga ku saabsan xayeysiintooda si joogto ah ayuu hoos ugu dhacay.
Aniga ahaan, xayeysiisyada dhawaanahan waxay sameynayaan shaqo fiican oo ah sameynta isticmaaleyaasha hadda jira ee Mac inay dareemaan inay ka sarreeyaan doorashadooda marka loo eego inay keenaan isticmaaleyaasha cusub xarkaha. Si tartiib ah (oo muuqaal ah) u muuji waxtarka badeecadaada oo dadka ayaa dhankaaga ka imaan doona. Si badheedh ah u caaya tartanka, iyo si aan toos ahaynba kuwa u adeegsada, oo waxaad halis ugu jirtaa kala fogaansho iyo diidmo madax adag oo xitaa aad ka fikirto isbeddel.
Ma hubo sida wax ku oolka ah ee xayeysiiska Laptop Hunter ee Microsoft guud ahaan, laakiin waxay ugu yaraan muujinayaan qiimaha iyo faa'iidooyinka kala duwan ee kumbuyuutarrada ku saleysan Windows. Aniga shaqsiyan, waxaan rabay $ 2,800 17 ″ MacBook Pro, laakiin waxaan iibsaday $ 325 netbook ku saleysan Windows. Buuggu wuxuu ka soo horjeedaa MacBook Pro, laakiin farqiga u dhexeeya qiimaha ayaa igu kallifay inaan dib uga fiirsado waxa lagama maarmaanka ah iyo waxa run ahaan fiicnaan lahaa inaan haysto.
Apple marwalba waxay lahaan doontaa tiknoolajiyad daacad ah oo soo socota, marka lagu daro waxaa jiri doona kuwa diyaar u ah inay lacag badan ku bixiyaan adeegsiga weyn. Laakiin dhaqaalaha hadda jira wuxuu ku qasbayaa dad badan inay gaaraan go'aano ku saleysan kaliya kharashka hore, taasna waligeed maahan qayb suuq ah oo Apple ay u muuqato inay la tartameyso. Xayeysiintooda haatanna sinaba uma hagaajin karto xaaladdan, xumaan iyo samaanba.
May 28, 2009 at 7: 40 PM
In yar ka dib waxaan maqlay Merlin Mann oo leh haddii iibsashada Apple aan u qalmin lacagta, markaa taasi uma qalanto lacagta – taas oo aan aaminsanahay.
Shaacinta: Waxaan u isticmaalaa Mac goobta shaqada iyo mashiinka Windows-ka ee guriga.
May 28, 2009 at 11: 45 PM
Waxaan u maleynayaa inaad wareersan tahay marketing iyo advertising.
Suuqgeynta Apple tan iyo markii ay soo laabatay shaqooyinku waxay ahayd mid aan la dafiri karin oo qurux badan halka qaar ka mid ah xayeysiisyada iyo ololeyaasha ay mararka qaarkood gaabiyeen.
Waxaan aaminsanahay in doodda ku saabsan in guulaha waaweyn ee dhowaanahan ay gaareen Apple ay sabab u tahay suuqgeyn ay gabi ahaanba been tahay. Saldhigga istiraatiijiyadda Apple wuxuu had iyo jeer sameynayay alaab aad u wanaagsan, ma ahan suuqgeyn weyn.
IPod-gu wuxuu ahaa guul weyn oo aan ahayn sababtoo ah xayaysiisyada silhouette ee qoob-ka-ciyaarka, laakiin sababtoo ah waxay ahayd / waa wax soo saar la yaab leh oo / ka fog oo ka sarreeya wax kasta oo suuqa yaal.
Iyadoo aan loo eegin xaaladaha dhaqaale, macaamiisha ayaa had iyo jeer bixin doona badeecooyin waaweyn. Apple waxaa lagu aasaasay hoos u dhac dhaqaale wuxuuna sii wadaa inuu ku kobco dhaqaalahan.
Sheegashada ay Microsoft ka helayso saamiga suuqa ee Apple ayaa laga yaabaa inay waxoogaa dhicis tahay. The wararka taas oo aan arkay waxay umuuqataa inay sheeganeyso cagsigeeda.
May 29, 2009 at 12: 31 AM
In kasta oo aan xusayo xayeysiinta, weli waxaan su'aal ka qabaa suuqgeynta, ma ahan xayeysiinta. Sidoo kale su'aal kama keenayo alaabada cajiibka ah. Waxaan kaga jawaabayaa faallooyinkaan Ipod-ka iyo laptop-kayga aan doorto waa MacBookPro. Su’aashaydu waxay tahay intee miisaan ayuu leegyahay suuq geynta suuq geynta Apple guushooda? Miyuu ahaa hanti fudud oo door ka ciyaaray?
May 29, 2009 at 8: 51 AM
Waan jeclahay doodan. Waad ku mahadsan tahay bilowga. Aragtidayda, Apple waxay leedahay oo ay sii wadi doontaa inay lahaato suuq geyn fiican. Shirkaddu waxay ku adkaysatay hoos u dhacyo badan, in badan qayb ahaan sababtoo ah suuqgeynta suuqgeynta iyo awoodda ay ula qabsan karto dime. Ololaha xayeysiinta ee hadda socdaa waa hal shey oo istiraatiijiyad ah, taas oo aan u maleynayo in faallooyin badan ay diiradda saaraan xoogaa aad u culus. Waxaan u maleynayaa tixraaca xayeysiiska bilowga inuu dadka ku dhajiyay wadadaas. Iyadoo aan loo eegin, istiraatiijiyadda suuqgeynta ee Apple waxay ku lug leedahay wax aad uga badan qayb ka mid ah xayeysiinta taatikada. Qorshaynta badeecada, qiimaynta, meelaynta, qaabaynta, iyo waqtiga lagu fulinayo iyada oo loo marayo xayeysiinta la beegsanayo, pr, dhacdo, iyo tabaha kale ee iibka tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn iyo xeeladaha ayaa shirkadan ku sii hayn doona safka hore ee wada hadalada suuq geynta muddo dheer.
Jun 3, 2009 saacadu markay ahayd 3:56 AM
Hi Douglas, waan ka xumahay inaad ka tagto faallo mowduuca ka baxsan, laakiin waxay u muuqataa iskuxiraha ugu horreeya, ee dhahaya guji tuur si aad u aragto fiidiyoow, wuxuu ku xirmayaa fiidiyow wuxuu u horseedaa bog 404 ah, “Ma aanan heli karin taas! Ama waad luntay ama annagaa nahay! ”. Mar labaad… raaligelinta faallooyinka mowduuca ka baxsan.